लेख/रचना देशमाथि दुर्दशाका अनेक दृश्य � मोहनविक्रम सिंह राष्ट्रिय सहमति आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । त्यसका आधारमै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा संशोधन, राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश आदिको गति अगाडि बढ्न सक्छ । तर, माओवादी नेतृत्व वा त्यसले नेतृत्व गरेको सरकारले राष्ट्रिय सहमतिका सबै बाटा वा ढोका बन्द गर्ने नीति अपनाएको त होइन ? भन्ने आशंका लगातार बढ्दै गइरहेको छ । उनीहरूले अगाडि ल्याएको �प्याकेज�मा सहमति वा संविधानका विवादित विषयमा समेत राष्ट्रिय सहमतिको अवधारणाले वास्तवमा राष्ट्रिय सहमतिको ढोका बन्द नीतिलाई नै स्पष्ट पार्छ । उनीहरूको त्यसप्रकारको नीतिका कारण देशमा देखा परेका संवैधानिक र राजनीतिक गत्यावरोधलाई कुनै निकास नदिने मात्र होइन, देश अधिनायकवादतिर जाने र राष्ट्रघातको सिलसिला बढ्दै जाने गम्भीर आशंका बढ्दै गइरहेको छ । यदि, यही प्रकारको स्थिति कायम रह्यो भने त्यसको समाधान सायद तेस्रो जनआन्दोलनद्वारा मात्र सम्भव हुनेछ । तर, तत्काल त्यसप्रकारको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता कायम हुने वा त्यो आन्दोलन सशक्त प्रकारले अगाडि बढ्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । देशमा एक प्रकारले न राष्ट्रिय सहमति न तेस्रो जनआन्दोलनको स्थिति देखा परिरहेको छ । त्यो स्थितिले देशलाई कहा� लैजाने हो ? त्यसको जवाफ अज्ञात भविष्यको गर्भमा लुकेको छ ।
चुनवाङ बैठकले माओवादीका लागि मात्र होइन, नेपालको राजनीतिक इतिहासमै गम्भीर मह�व राख्छ । त्यो बैठकमा उनीहरूले उग्र �वामपन्थी� नीतिको ठाउ�मा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नीति अपनाउने निर्णय गरे � बहुदलीय व्यवस्थाको विरोध गर्ने नीतिको ठाउ�मा त्यसका लागि संघर्ष गर्ने नीति अपनाए � राजापरस्त नीतिको ठाउ�मा प्रतिगमन र निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध संघर्ष गर्ने नीति अपनाए � बहुदलीयता पक्षधर राजनीतिक शक्तिमाथि आक्रमण गर्ने नीतिको ठाउ�मा उनीहरूले प्रतिगमनविरुद्धको संयुक्त आन्दोलनमा सामेल हुने नीति अपनाए । उनीहरूको नीतिमा आएको उक्त परिवर्तनले प्रतिगमन वा निरंकुश राजतन्त्रविरुद्धको संघर्षमा धेरै योगदान दियो ।
चुनवाङ बैठकले माओवादीलाई लोकतन्त्रको पक्षमा उभ्यायो तर त्यसमा दुईवटा कुराले बाधा पु�याए ः प्रथम, चुनवाङ बैठकमा उल्लिखित सही निर्णयका बाबजुद अवशेषका रूपमा रहेका उग्र �वामपन्थी� सोचाइ वा कथित जनयुद्धकालमा उनीहरूले व्यापक रूपमा अपनाउने सामाजिक�फासीवादी प्रकारका (निश्चय नै, पूरै नै सामाजिक फासिवादी होइन) सोचाइ, द्वितीय, प्रचण्डमा अत्यधिक रूपमा रहेको अराजकतावादी व्यक्तिवाद र चरम मह�वाकांक्षा । परिणाम यो भयो कि उनीहरूले लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता प्रकट गरे पनि इमानदारीपूर्वक व्यवहार गर्न सकेनन् । त्यसको परिणाम यो भयो कि उनीहरूले लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुसार व्यवहार नगरी तिनीहरूको सीमाको अतिक्रमण गरे । सत्ता प्राप्त गर्ने वा त्यसमाथि आ�नो कब्जा जमाइराख्ने नीति अपनाए । माक्र्सवादी�लेनिनवादीहरू प�ुजीवादी लोकतन्त्रमाथि सैद्धान्तिक र रणनीतिक रूपले आस्था राख्दैनन् । हाम्रो उद्देश्य यसलाई समाप्त गरेर यसको ठाउ�मा नया� जनवादी व्यवस्था वा नया� जनवादी गणतन्त्र कायम गर्नु हो । त्यसप्रकारको सैद्धान्तिक वा रणनीतिक अडानका बाबजुद अहिलेको ऐतिहासिक र वस्तुगत अवस्थामा लोकतान्त्रिक प्रणालीको चरित्र प�ुजीवादी प्रकारको भए पनि त्यसको प्रगतिशील मह�व छ । त्यसको सफलताले भावी क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन आधार तयार पार्नेछ । त्यसैले नया� जनवादी क्रान्तिका लागि परिस्थिति र आधार तयार पार्ने कारबाहीलाई लगातार अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा त्यसप्रकारको नीतिलाई व्यावहारिक रूपमा सफल पार्ने आधार तयार भएको छैन । त्यसकारण नया� जनवादी क्रान्तिका लागि परिस्थिति सिर्जना गर्ने प्रयत्नलाई कायम राख्दै तत्कालका लागि लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सफल र सुदृढ गर्न पूरा शक्ति लगाउनुपर्छ । यदि, यो लोकतन्त्र असफल हुन्छ वा देश प्रतिगमनतिर जान्छ भने अहिलेका उपलब्धि, ०६२�६३ को आन्दोलनका उपलब्धि, प�ुजीवादी प्रकारको भए पनि लोकतन्त्र वा गणतन्त्रका उद्देश्य पुनः प्राप्त गर्न हामीले अरू ५० वर्ष पछाडि गएर संघर्ष गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन नदिन र लोकतन्त्र वा गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न माक्र्सवादी�लेनिनवादीले इमानदारीपूर्वक काम आवश्यकता छ ।
माओवादीले प्याकेजमा राष्ट्रिय सहमति वा संविधानका विवादित प्रश्नसमेतमा सहमतिका जुन कुरा गरिरहेका छन्, त्यसको अर्थ यो हुन्छ ः उनीहरूले अगाडि सारेका अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ । त्यो राष्ट्रिय सहमतिसम्बन्धी एकाधिकारवादी दृष्टिकोण हो । त्यसप्रकारको अवधारणाले राष्ट्रिय सहमतिका सबै संवैधानिक बाटा वा ढोका बन्द गर्छ । त्यसप्रकारको दृष्टिकोणले अन्य पक्षलाई उनीहरूका अगाडि आत्मसमर्पण गर्न दबाब दिन्छ । त्यसले अन्य पक्षलाई यसका लागि बाध्य गर्छ ः या त उनीहरूले माओवादीका अगाडि आत्मसमर्पण गरून् वा राष्ट्रिय सहमतिलाई अस्वीकार गरून् । माओवादीले जुन रूपमा राष्ट्रिय सहमतिको अवधारणा अगाडि सारेका छन्, देश र लोकतन्त्रका व्यापक हितमा त्यसलाई अस्वीकार गर्नु नै सही हुनेछ ।
यो आमरूपमा थाहा भएको कुरा हो कि यही सालको जेठ २ गते बहुजातीय आधारमा प्रदेश निर्माणको सहमतिबाट माओवादी नेतृत्व पछाडि हटेपछि नै संविधान निर्माणमा विवाद उत्पन्न भएको थियो र संविधान निर्माण नगरी संविधानसभा विघटन भएको थियो । माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहिले संविधानसम्बन्धी विवादित प्रश्नमा पूर्ण सहमति हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ यो हो� संविधानसम्बन्धी विवादित प्रश्नमा (माओवादी, मधेसवादी) र जातिवादी संगठनका अवधारणालाई अन्य पक्षले स्वीकार गर्नुपर्छ । अनि मात्र राष्ट्रिय सहमति हुन सक्नेछ । उनीहरूका त्यसप्रकारका अवधारणामा एकल जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेश निर्माण, एक मधेस�एक प्रदेश वा पहाडबाट बेग्लै तराईमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित प्रदेश निर्माण, आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय अग्राधिकार, बहुराष्ट्रवाद आदि आउ�छन् । संविधानसम्बन्धी जुन प्रश्नमा विवाद छ, त्यो संविधान निर्माण क्रममा टुंगिने प्रश्न हुन् । ती प्रश्नमा अहिले नै सहमति हुनुपर्छ भनेर पूर्व सर्त राख्नुको अर्थ संविधानसम्बन्धी आ�ना मतलाई अहिले नै सर्तका रूपमा उनीहरूले अन्य पक्षमाथि लाद्न चाहन्छन् । त्यो लोकतान्त्रिक नभएर अधिनायकवादी दृष्टिकोण हो । त्यसप्रकारको दृष्टिकोणअनुरुप संविधानसम्बन्धी विवादित प्रश्नमा अहिले नै सहमति कायम गर्न अन्य पक्षलाई बाध्य गर्ने प्रयत्न गरेर उनीहरू अन्य राजनीतिक शक्तिको संविधान निर्माणसम्बन्धी स्वतन्त्र मत प्रकट गर्ने अधिकारलाई समाप्त पारिदिन चाहन्छन् । त्यसप्रकारको सोचाइलाई कुनै पनि अवस्थामा लोकतान्त्रिक पद्धति भन्न सकिन्न । त्यसैले उनीहरू राष्ट्रिय सहमतिसम्बन्धी एकाधिकारवादी दृष्टिकोणमा अडान लिइरहन्छन् भने त्यसले लोकतन्त्रको सम्पूर्ण आधारलाई खलबल्याउनेछ । वर्तमान सरकार कामचलाउ मात्र हो । त्यसकारण त्यसको अधिकारक्षेत्र सीमित छ । त्यो अवस्थामा सरकारका लागि सबैभन्दा सही कुरा यो हुनेछ ः राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा छिटोभन्दा छिटो नया� राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपतिले गठन गरेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले नै नया� चुनाव घोषणा गर्नेछ । त्यो सरकारको सिफारिसमा अन्तरिम संविधानको बाधा�अड्काउ फुकाउने व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेशद्वारा निर्वाचनसित सम्बन्धित संविधान र कानुनमा संशोधन गरेर निर्वाचनका कार्य सम्पन्न गरिनेछ । यो स्वाभाविक र संवैधानिक प्रक्रिया हो । तर, सरकारले यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्ने नीति अपनाउ�दै छ ।
अब यो प्रस्ट भइसकेको छ, सरकारले घोषणा गरेको मंसिर ७ गतेको चुनाव सम्भव छैन । वर्तमान कामचलाउ सरकारलाई चुनाव घोषणा गर्ने वा त्यसलाई सम्पन्न गर्ने कुनै अधिकार छैन । त्यो सरकारको सिफारिसमा चुनावसम्बन्धी संविधान वा कानुनमा संशोधनका लागि राष्ट्रपतिद्वारा कुनै अध्यादेश जारी गर्नु पनि असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हुनेछ । त्यो स्थितिमा यो सरकारले जतिपटक चुनाव घोषणा गर्नुपरे पनि त्यसको कुनै परिणाम निस्कने छैन । त्यसरी चुनाव हुन्न वा त्यसबारे बारम्बार गरिएका चुनाव घोषणाको कुनै परिणाम निस्कन्न भने पनि यो सरकारको चिन्ताको विषय हुनेछैन । किनभने त्यो अवस्थामा यो सरकारलाई अनिश्चित समयसम्म आ�नो आयु लम्ब्याउन मद्दत पुग्नेछ ।
सरकारको राष्ट्रिय सहमतिसम्बन्धी एकाधिकारवादी दृष्टिकोणबाट देशमा संवैधानिक र राजनीतिक गत्यावरोधको अवस्था अनिश्चित समयसम्म रहिरहने र अधिनायकवाद कायम रहने खतरा त रहने नै छ । त्यसबाहेक देशमा राष्ट्रघातको सिलसिला बढेर जाने सम्भावना पनि रहनेछ । वर्तमान सरकार, एकातिर, मधेसवादी र अर्कातिर, भारतीय विस्तारवादको बलमै टिकेको छ । मधेसवादीको यो सरकारलाई समर्थन रहेको कुरा प्रस्ट छ । रियो (ब्राजिल)बाट फर्केपछि डा. भट्टराईले एयरपोर्टमा प्रकट गरेको अभिव्यक्ति वा उनको कडा स्वर त्यहा� भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट उनको सरकारलाई दिइएको समर्थनको नै परिणाम थियो । भारतीय विस्तारवादको स्वार्थमा काम गर्ने र भट्टराई सरकारलाई त्यो दिशामा काम गर्न लगाउने मधेसवादीको घोषित नीति छ । आ�ना विस्तारवादी स्वार्थ पूरा गर्न बढीभन्दा बढी फाइदा उठाउन भारतीय विस्तारवादले पनि यो सरकारलाई टिकाइराख्न चाहन्छ । त्यो अवस्थामा वर्तमान सरकारले एकपछि अर्को गर्दै राष्ट्रघाती नीति अपनाउ�दै जाने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यो स्थितिमा वर्तमान सरकार जति लामो समयसम्म टिक्नेछ, त्यति नै बढी देश अधिनायकवादतिर जाने तथा राष्ट्रघात बढ्दै जाने र त्यसरी देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका अगाडि खतरा बढ्दै जाने सम्भावना रहनेछ । त्यो अवस्थामा लोकतन्त्रको रक्षा तथा राष्ट्रिय हितरक्षाका लागि वर्तमान सरकारविरुद्ध संघर्ष बढाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गइरहेको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय सहमतिसम्बन्धी एकाधिकारवादी दृष्टिकोणमा सुधार नगरेमा जनआन्दोलनबाहेक अहिलेको राजनीतिक र संवैधानिक गत्यावरोधको निकासका लागि अन्य कुनै विकल्प छैन । त्यसप्रकारको आन्दोलन बढ्न सक्नेछ वा छैन ? त्यसले नै नेपालको भावी राजनीतिक विकासक्रमलाई निर्धारित गर्नेछ ।
अन्त्यमा एउटा कुरा, माओवादीले लामो समयसम्म सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिअन्तर्गत नै राष्ट्रिय सहमतिसम्बन्धी एकाधिकारवादी दृष्टिकोण अपनाएको कुरा स्पष्ट छ । तर, त्यसको पहिलो परिणाम यो हुनेछ ः ०६२�६३ को आन्दोलनका उपलब्धि र गणतन्त्रसमेतमा आघात पुग्नेछ । त्यो अवस्थामा देशको राजनीतिमा कैयौ� नया� वा अहिले अज्ञात र छद्म रूपमा रहेका कारक त�व पैदा हुने र त्यसको परिणामस्वरूप देशमा लोकतन्त्र तथा देशको राष्ट्रियतामा समेत गम्भीर आ�च पुग्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यो अवस्थामा स्वयं माओवादीलाई समेत गम्भीर क्षति पुग्यो भने पनि त्यो कुनै आश्चर्यको कुरा हुने छैन । त्यसप्रकारको स्थिति उत्पन्न हुन नदिन माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिसम्बन्धी एकाधिकारवादी दृष्टिकोण छाडेर देशमा लोकतन्त्र वा गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्नु नै सबैभन्दा बुद्धिमानी हुनेछ । त्यो नै सम्पूर्ण देश र जनता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, भावी क्रान्तिकारी आन्दोलन र स्वयं माओवादीको पनि हितमा हुनेछ ।
प्राप्त प्रतिक्रियाहरु	(0) यसमा तपाईको प्रतिक्रिया	(रोमनबाट युनिकोड नेपालीमा लेख्नुहोस्) नाम